MAHALEO NY HAVilland DHC-6-300 eny ambony skis FSX - Rikoooo
Mpanoratra: Premier Aircraft Design, Kenn Borek, Luca Paoloni
Kenn Borek Air dia monina any Calgary, Kanada, ary ankoatra ny miasa ny fiaramanidina faritra lavitra manompo amin'ny faritra avaratr'i Kanada izy ireo fiaramanidina sata maneran-tany ny varotra, siansa sy fikambanana maha-olona ho fampiasana amin'ny nobeazin'ny lalana.
Miasa ny orinasa iray amin'ireo lehibe indrindra DHC-6 fleets eo amin'izao tontolo izao, amin'izao fotoana izao miisa 42, sy noho ny Hainy ny DHC-6 dia azo nanofa avy amin'ny kodiarana, ski na mitsingevana araka ny takian'ny ny mpanjifa. Indraindray fiasany ao amin'ny mpanjifa ny ny fanamian'ny, indraindray in Kenn Borek fanamian'ny ary indraindray ny fitambaran'ny roa.
Io fonosana roa ahitana modely ny DHC-6 Twin Otter, fohy orona dika amin'ny ski sy lava orona dika amin'ny Tundra kodiarana. Custom tontonana sy VC tafiditra amin'ny feno-6 DHC feo rakitra. New sidina fihetsehana manome zava-misy sy mahafinaritra fampisehoana sy ny fikirakirana.
Ants Havilland Tiger Moth DH-82A v1.1 FSX